ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းမှာ ဒီလိုအကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတွေမရှိသင့်တော့ပါဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းမှာ ဒီလိုအကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတွေမရှိသင့်တော့ပါဘူး
ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းမှာ ဒီလိုအကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတွေမရှိသင့်တော့ပါဘူး
Posted by TRUTH on Jul 29, 2012 in News | 11 comments
25.7.2012 နေ့ တွင် ပေါင်းတည်ဗီဒီယို အခြေခံ အဖွဲ့၊ မူပိုင်ရှင်များ၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့များသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ မူပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိသော တရားမ၀င်မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားခွေ များ ကော်ပီပွား ခိုးငှားနေသော ပေါင်းတည်မြို့ပုတီးကုန်းလမ်းနေ ဦးစန်းမြင့် ဒေါ်ဌေး တို့ ၏ နေအိမ်သို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာတွင် ပထမတစ်ရက်24.7.2012 ညနေပိုင်း ကတည်းက ပေါင်းတည်ရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်း ၀င်းဇော် ဆိုသူက ကြိုတင်သတင်းပေး သိမ်းဆည်းခိုင်းထားသဖြင့် မည်သည့်မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားခွေ ကိုမျှ ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
L L has written5post in this Website..
I like truth.
View all posts by TRUTH →
ချစ်ရင်ထူး II says:
အဲဒါဆိုလည်း သေချာနေရင် ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော မှုနဲ့ ဖမ်းလိုက်ပေါ့ ..
မရှိသင့်တော့တာ အမှန်ပါ .. အဲဒါမျိုးတွေ ရှိနေရင် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ မြင်သာမြင်ရ မကြင်ရ တဲ့ဘဝရောက်သွားမှာ စိုးမိပါတယ် ..
ဒီလိုမျိုး နာမည်တွေ လိပ်စာတွေ နဲ့ တိတိကျကျ ရေးဖော်ပေးတော့
သတင်းအပြည့် အစုံ ကတော့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပေါင်းတည်မြို့ မှ အဂတိလိုက်စား၊အကျင့်ပျက် နယ်ထိန်းတစ်ဦး (Ref;Daily
Online News on Facebook)
25.7.2012 နေ့ တွင် ပေါင်းတည်ဗီဒီယို အခြေခံ အဖွဲ့၊ မူပိုင်ရှင်များ၊ဗီဒီယို အခွေအငှားဆိုင်ပိုင်ရှင်များ၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင် များပါဝင်သည့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့ သည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ မူပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိသော တရားမ၀င်မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားခွေ များ ကော်ပီပွား ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန
့်ခိုးငှားနေသော ပေါင်းတည်မြို့ပုတီးကုန်းလမ်းနေ ဦးစန်းမြင့် ဒေါ်ဌေး တို့ ၏ နေအိမ်သို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာတွင် ပထမတစ်ရက်24.7.2012 ညနေပိုင်း ကတည်းက ပေါင်းတည်ရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်း ၀င်းဇော် ဆိုသူက ၄င်း လမ်းထိပ်တွင် နေသူတစ်ဦး နှင့် ၄င်း လမ်းထဲရှိ တရားမ၀င်နှစ်လုံး၊သုံးလုံးထီ ရောင်းချနေသည့် ( အမည်မဖော်ပြလိုပါ)သူ နှစ်ဦးအား “ ဦးစန်းဝင်း ဆိုတာ လမ်းထဲမှာ ဘယ်သူလဲ ” မေးသဖြင့် ၄င်းသူများက “ ဦးစန်းဝင်းဆိုတာ မရှိဘူး၊ဦးစန်းမြင့် ဆိုတာတော့ရှိတယ် ဘာဖြစ်လို့ လဲ” ပြန်မေးသောအခါ ထို နယ်ထိန်း ၀င်းဇော်မှ “ သူ ကအခွေငှားတယ် မဟုတ်လား၊ငှားရင်သိမ်းထားလိုက်တော့ မနက်ဖြန် လာဖမ်းဖို့ ရှိတယ် စခန်းမှူးကလည်း သိပ်ဖမ်းပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး”ဟု ပြောသဖြင့် နှစ်လုံးထီ၊သုံးလုံးထီ ရောင်းသူမှ ကြိုတင်သတင်းပေး သိမ်းဆည်းခိုင်းထားသဖြင့် မည်သည့်မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားခွေ ကိုမျှ ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ထို ကဲ့ အဂတိလိုက်စားသော
အကျင့်ပျက် ရဲဝန်ထမ်းကို ထိရောက်စွာအရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် တင်ပြ အပ်ပါသည်။
ဟဟ .. နယ်ထိန်း တစ်ယောက်က ဘယ်အိမ် ဘယ်သူမသိရှာလို့ သူများသွားပြောတယ် ဆိုတော့ .. ယုံချင်လိုက်တာကွယ်။။
ဒီလို မျိုး သိလို့ ကတော့ နယ် ထိန်းက အသစ်မို့လို့ ဦး စန်းမြင့် မသိဘူး ထား .. ရပ်ကွက်ထဲက လမ်း ဘယ်လောက်ရှည်တာမို့လို့ .. သွားရှာ ကိုယ်တိုင်ပြောပြီး ပိုက်ဆံတောင်း ပြန်မပေါ့ …. ကျေးဇူးစား ကျေးဇူး ခံ သွား လုပ်မှာပေါ့ ။။။။
သူများတွေ အချုပ်ကျ၊ တရားရင်ဆိုင်ရနဲ့ စရိတ်တွေ အများကြီး
ကုန်မှာစိုးလို့ စရိတ်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေးတာနေမှာပါ။
အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ မှိုထက်ပေါပါတယ်
ဘယ်ရုံး ဘယ်ဌာနကို သွားသွား under table ( အာရကေ ) မပါရင်
ဘယ်တော့မှ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး၊သေးသေးကလည်း သေးသေး
အလျောက်၊ကြိးကြိးကလည်း ကြိးတဲ့အလျောက် လာဘ်စားနေကြတာပါ။
ဒါကလည်း ကြိုးနိစနစ်ရဲ့ ဆိုးမွေလို့ပြောလို့ရသလို၊အစဉ်အဆက် အုပ်ချုပ်လာ
ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ညံဖျင်းမှုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။အခုချိန်
အထိလည်း အမြစ်တွယ်နေဆဲမို့ အနာသိပေမဲ့ ဆေးမရှိတဲ့ AIDS ရေဂါနဲ့
ကိစ မပြီးခင် ရေလောင်းပါ ကိစ ပြီးလျှင် ရေများများလောင်းပါ (အိမ်သာထဲကစာတန်း)
ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး …. ကျွန်မ အရမ်းရယ်ချင်သွားမိတယ် …. ။ (ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကို မရည်ရွယ်ပါနော် )
ရယ်ချင်မိတာ … တကယ်ပါ …… ဘာလို့လဲဆိုတော့ …… လုပ်စားတော့ မိုးခေါင်ဆိုသလိုမျိုးမို့ပါ … ။
ပေါင်းတည်လို နေရာမျိုးကို သွားပြီး …. ခိုးကူးခွေ အိမ်မှာ လာရှာတာတို့ ဘာတို့ ထိ ခက်ခက်ခဲခဲ ..လုပ်တယ် … ။တကယ်ဖမ်းချင်လျှင် မြို့ထဲမှာ ပေါ်တင်ရောင်းနေတာ …. အပြုံးတောင်မပျက်ဘူး … ။
ပြောရလျှင်လေ .. .အရူးချီးပန်းလိုပါပဲ … ။ဟိုတကွက် ဒီတကွက်နဲ့ … ။
စီမံချက်ရှိတိုင်း ကွက်ကြားမိုး ရွာရွာနေတာ .. အမှန်တကယ် စိတ်ပျက်မိပါတယ် … ။
ခိုးကူးခွေ တကယ် ပပျောက်ချင်လျှင် …. ဖိဖိစီးစီး … နေရာတိုင်းမှာလုပ် … မိလျှင် ဒဏ်ရိုက် ၊ငွေဒဏ် ၊ ထောင်ဒဏ် … တကယ်သာ … အတိကျ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်လုပ်ကြည့် နောက်ပိုင်း …. လူတွေကြောက်ပြီး ခိုးကူးလုပ်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး … ။ သူတို့ဘက်ကသာ … တကယ်ပပျောက်စေချင်တဲ့ စိတ်ရှိဖို့ပဲ လိုတယ် …. ။
အင်း… ပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တွေလည်း စိတ်မလုံပါဘူး။ အခွေသစ်လေးများထွက်ပြီဆိုရင် လမ်းဘေးကဆိုင်ကိုပဲ သွားမေးမိတယ်။ သုံးခွေတစ်ထောင်ဆိုတော့လည်း ၀ယ်မိတာပေါ့လေ။ နယ်မှာဆိုရင်လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့သီချင်းလေးတွေသွားပြောပြီး ဆိုင်ကို အခွေလေးဘန်းခိုင်း..တစ်ခွေမှ သုံးရာ…
ဆိုင်ပေါ်က တစ်ခွေ ထောင့်ငါးရာလောက်ရှိတဲ့ အော်ရီဂျင်နယ်ကိုလည်း အမြဲမ၀ယ်နိုင်ဆိုတော့… အင်း…
ဒီကိစ္စ က သီချင်း Copy ခွေ ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။နယ်တွေမှာက မြန်မာဗီဒီယို ကားတွေကို မူပိုင်ကြေး
တစ်ကားကို သောင်းဂဏန်း သိန်း ဂဏန်း နဲ့ ပေးဝယ်နေရတာပါ။မြို့ ကြီးတွေမှာလို RC ကြေး
ထောင် ဂဏန်းလောက်ပေးဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။ အဲဒါကို ခိုး ငှားတဲ့ လူတွေက ရန်ကုန်လမ်းဘေး ကနေ 300 ။400။500 လောက်နဲ့ ဝယ်ပြီးခိုးငှားနေကြတာပါ။ ညီမတို့ လဲနယ်မူပိုင်ရှင်နေရာ က ၀င်ခံစားကြည့် နိုင်ပါတယ်။
ကိုပေရေ ငယ်ငယ်တုံးကနောက်ပြောကြတာကြားဖူးတယ် စည်တော်ကြီးဆိုလား၊ ကြေးစည်ဆိုလားတီးရင် မည်ပါသတဲ့ “ မထင် မထင် ´´ တဲ့။